ကိုပေါက်လက်ဆောင် ဂီတပန်းပွင့်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Entertainment » ကိုပေါက်လက်ဆောင် ဂီတပန်းပွင့်များ
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Jan 13, 2013 in Entertainment, Music | 23 comments
မန်းလေးဂေဇက်ဆိုက်မှာ သီချင်းမတင်ရဆိုတဲ့အတွက် ဒီထဲကပါတဲ့ သီချင်းတွေကို ဖျက်ထားပါတယ်။
အရင်က မန်းလေးဂေဇက်ကနေ သီချင်းတွေကူးယူခဲ့ဘူးပါတယ်။
အခုတော့ သီချင်းနဲ့ပါတ်သက်ရင် ဘာမှမရှိတော့ပါဘူး။
အခုလောလောဆယ် ၀ယ်လို့ရတဲ့သီချင်းတွေကိုတော့ တင်မပေးပါဘူး။
ဟိုးရှေးရှေးက ရှိခဲ့တဲ့ ခင်ဝမ်း ခိုင်ထူး ခင်မောင်တိုး တို့သီချင်းတွေကို တင်ပေးပါမယ်။
လိုချင်သူများ အတွက် မျှပေးချင်လို့ပါ။
ကျနော်ဆိုရင် ခင်ဝမ်းရဲ့တောင်ပေါ်သူ သီချင်းကို အကြာကြီးနေမှာ ပြန်ရှာလို့ ရတာပါ။
” အခုလောလောဆယ် ၀ယ်လို့ရတဲ့သီချင်းတွေကိုတော့ တင်မပေးပါဘူး ”
ကိုပေါက်ကလည်း စေတနာ ထားမယ့်ထားတော့ ၊
နောက် တဖြေးဖြေးပေါ့ ၊ မလောပါဘူး ၊
ဒါပေမယ့် ၊ ရှိသမျှ ရသမျှ တော့ အကုန် တင်ပါဗျ ။
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲဆွဲ အပ်ပ်လုပ်ဆွဲဆွဲ အချိန်ကုန်ပါ၏။
နောက်တစ်ချက် ကသူများတင်ထားတဲ့သီချင်းကိုလင့်ပေး ခရက်ဒစ်ပေးပြီး တင်ရင်လဲလွယ်ပါတယ်။
ကျနော်ကိုယ်တုိင် http://www.minus.com ၀က်ဆိုက်မှာ တင်ထားတဲ့သီချင်းတွေကို သာ ပြန်လည်မျှဝေ
အဲဒီသီချင်းကို mp3 ဖိုင်အဖြစ်ပြန်ပြောင်းရပါတယ်။
နောက်မှ minus မှာအပ်လုပ်ဆွဲရပါတယ်။
သိတယ် ၊ ကိုပေါက် ၊ သိတယ် ။
ကျနော်တို့များ နိုင်ဂျန်ဂါး မှာသာနေတာ ၊
ကိုပေါက်လောက် ကွန်ပျူတာ နက်ဝါ့ကင်း မရဘူးဗျာ ။
သီချင်းတွေ ကြိုက်တယ် ဗျို့……. :hee:
သန်းကြူပြီး ရင် စောရီတော့ မလာပေ့စေနဲ့
အိုခေဗျာ… ကွန်မင့်ပေးရင်း နားထောင်စရာ သီချင်းရပြီ
ဦးမာဃ နားထောင်ချင်တာလေးတွေ ရသွားပြီ
ဟိုသီချင်းလေးလေ ……… လေးပေါက်
အလွမ်းရဲ့ သယ်ဆောင်ရာ… ဟို..အဝေး………….ကို …..အဝေး..ကို
သီချင်းနာမယ်က “နုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ”် တဲ့။
ခင်ဝမ်း ဆီးရီးစ် အားလုံးကူးထားပါတယ်။
လောလောဆယ်တော့ ခင်မောင်တိုး ရဲ့ပထမဆုံးဆီးရီးစ်
ကျေးဇူးတင်တယ် ကမ္ဘာကြီးရယ်ကို Minus မှာအရင်တင်နေပါတယ်.။
Green Rose လည်းတစ်ချို့သီချင်းအဟောင်းတွေ သိမ်းထားတာရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အသံတွေကျတော့ သိပ်မကောင်းဘူးဖြစ်နေတယ်။ Tape နဲ့ထွက်ထားတာတွေကို mp3အဖြစ် ရထားတာတွေပါ။ အဲဒါတွေက အသံ Quality ကောင်းကောင်းရအောင် လုပ်လို့ရလားဟင်…
မူရင်းခွေမကောင်းရင်တော့ ဘာမှ လုပ်လို့မရလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။
ကျနော်လဲ တေးသံသွင်းဆိုင်မှာသွားကူးပြီး ပြန်တင်ပေးရတာပါ။
တစ်ချို့သီချင်းကတော့ အင်တာနက်ကဒေါင်းလုပ်ဆွဲထားတာလဲ ရှိပါတယ်။
တစ်ချို့သီချင်းတွေကတော့ သီချင်းဝါသနာပါသူမိတ်ဆွေအချင်းချင်းမေးလ်နဲ့ပို့ပေးရင်း ရတာပါ။
ကျနော်မှာ ဓါတ်ပြားသီချင်း ရှေးသိချင်း ရေဒီယိုသီချင်းအတော်များများ စုဆောင်းထားပါတယ်။
မြန်မာသံလေးတွေနားထောင်ကြရအောင် လို့ရိုက်ထဲ့ရင် သိချင်းတွေကျလာပါမယ်
မဒေါင်းချင်ရင် နည်းရှိတဲ့ တစ်ခါတည်းနဲ့အကုန်လုံးရမယ်
ခင်ဝမ်းရဲ့ ဘယ်သူ့ကိုအချစ်မင်းပုံမှာတုံး ….. ဆိုတဲ့သီချင်းလေးလဲ ဆက်ဆက်ထည့်ပေးပါနော်..
အချစ်ဘယ်သူ့ပုံမှာတုံး ဆိုတဲ့သီချင်းကို ပထမဆုံးသီဆိုသူက ခင်မောင်တိုး ပါ။
လောလောဆယ် တော့ ခင်မောင်တိုးရဲ့ ပထမဆုံး ဆီးရီိးစ်တင်ပေးဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ
လေးပေါက် သာအနုပညာရှင်ဆိုရင် အကယ်ဒမီ ငါးခုလောက်ရနေပြီ အရမ်းတော်တဲ့လေးပေါက် ဘယ်သူပေးပေးမပေးပေး မိဗုံက အကယ်ဒမီပေးလိုက်ပြီ ညကြရင် မိုးပေါ်တက်ပြီး ယူဖြစ်အောင် ယူလိုက်နော်လေးပေါက် ရိုးရိုးကြယ်မဟုတ်ဘူး ဓူဝံကြယ်ကြီးပေးထားတာ (လေးပေါက် မွန်းအောင် ဆိုတာ မိဗုံအခုမှ ကြားဖူးတာ ခင်ဝမ်းတော့ကြားဖူးတယ်)
ဗေးကလုံ မသိဘူးဆိုတဲ့ မွန်းအောင်အကြောင်း
လေးလေးရေးခဲ့ဘူးတဲ့ ပိုစ်လေးထဲက ကောက်နုတ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်.
မသိသေးတာတွေ အများကြီးသိလိုက်ရတဲ့အတွက် လေးပေါက်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်
လေးပေါက်လည်း သီချင်းဆိုတာ ၀ါသနာပါခဲ့မယ်ထင်တယ် ကြုံလို့ရင် လေးပေါက်ဆိုပြတာ နားထောင်ချင်ပါတယ်
(လေးပေါက်လည်း သီချင်းဆိုတာ ၀ါသနာပါခဲ့မယ်ထင်တယ် ကြုံလို့ရင် လေးပေါက်ဆိုပြတာ နားထောင်ချင်ပါတယ်
အင်းနော် ကိုယ့်ဒွတ်ခ ကိုယ်ရှာတဲ့သူဆိုတာ ဒီလိုလူမျိုးထင်ပါရဲ့နော်